Guddiga doorashada Puntland oo ku dhawaaqey in waqtigii diiwaangelinta ururada dhamaadey - Horseed Media
Guddiga doorashada Puntland oo ku dhawaaqey in waqtigii diiwaangelinta ururada dhamaadey January 1, 2013 Share this:FacebookTwitterGoogleGuddoomiyaha Guddiga Doorashada Puntland Maxamed Xassan Barre
Guddiga doorashada Puntland ayaa shir-sxaaafadeed ku qabtey magaalada Garowe, waxaana ay ku dhawaaqeen saacaadu markey ahayd 17:00 31/12/2012 in muddadii diiwaangelinta urarada Siyasadeed ay soo afjarantey, waxaana ay shaaciyeen 6 urur oo ay sheegeen in ay buuxiyeen shuruudihii loo dhigey.
Guddiga doorashada ayaa sheegay in urarada is diiwaangeliyey ee ay u aqoonsadeen in ay soo buuxiyeen shuruudihii ay kala yihiin, sida ay diiwaan gelinta ugu kala horeeyeen
Guddoomiyaha guddiga doorashada ee Puntland Dr.Maxamed Xassan Barre ayaa sheegay in ay jiraan ururo kale oo codsadey in waqti la siiyo laakiin markaan aan fursad la siineyn, waqtigiina dhamaadey, horey ayaa waqtiga loo kordhiyey waana adagtahay in aan dib u furno waqtiga ayaa is guraya ayuu yiri Barre.
Guddiga ayaa sheegay in loo gudbaayo wejigii labaad ee ururaau isugu diyaarin lahaayeen qaab Urur ama Xisbi u noqon lahaayeen, gobolada dalka oo dhana xafiisyo uga furan lahaayeen, waxaana 10/02/2013 Guddigu sheegay in ay markaas ku dhawaaqayaan ururada buuxiyey in ay noqdaan Xisbi oo ka qaybqaadan kara doorashooyinka goloyaasha deegaanka iyo kuwo aan noqon, sida ay ku qoreen barnaamijkooda hawleed.
Dhegayso War-saxaafadeedkii Guddiga [powerpress]
Guddiga doorashada ayaa 11/09/2012 ku dhawaaqey furashada Xisbiyada siyaasadeed, waxaana ay u qabteen muddo saddex bilood ah taas oo ku ekayd 10/12/2012. Muddo laba bilood ah ayaa la waayey cid u shabkaxsata ama urur siyaasadeed furata taas oo ka liftey 13/11/2012 in qiimaha diiwaan gelinta la dhimo 50% lagana dhigo $7,500 halkii ay ahayd markii hore $15,000, sidoo kale waxaa la dhimey gobolada la doonayo in Ururku iska diiwaan geliyo lagana dhigey 5 gobol oo keliya. Maalin kadib waxaa Ururkii u horeeyey ku dhawaaqey Madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiraxmaan Faroole, kaas oo uu sheegay in dhamaan xukuumadda iyo golaha wakiilada iyo maamulada degmooyinka iyo goboladu ay kuwada jiraan. Markii la gaarey muddadii loo qaybtey is-diiwaangelinta ayaa waxaa la hayey Saddex urur kuwaas oo mid kamid ah aanu buuxin shuurada waxaana ay noqotey in mar kale dib loo dhigo muddada iyada oo lagu darey saddex todobaad.
Si kastaba ha ahaatee waxaa weli taagan muranka ku saabsan muddada xiilka Madaxweynaha Puntland, waxaana dad badan oo kamid ah shacabka Puntland ay marar badan sheegeen in Madaxweynaha muddadii loogu talo galay in uu hawshaan ku qabto isaga iska diley haddana ay saacadda u hayaan kana dalbanayaan in uu doorasho qabto Puntland ka bad-baadiyo in ay kala fur-furanto inta isku hartey, halka madaxweynuhu ku adkeysanayo in aanu qabanayn doorasho lamid ah tii isaga lagu doortey.